ဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ခြင်း၏စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရန် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဂျိုး Biden နှင့် Kamela Harris က
အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ခြင်း၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန် Joe Biden
နိုဝင်ဘာလ 11, 2020 နိုဝင်ဘာလ 10, 2020 David Wexelman ဘ‌‌လော့ခ်, ဒီမိုကရက်ပါတီ, အသားပေးသတင်းများ, ဣသရလေ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, နိုင်ငံရေး, ဘာသာ, ရီပတ်ဘလီကန်
ဘာသာရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုခွဲထုတ်ခြင်းသည်မင်းမဲ့စရိုက်ကိုသာ ဦး တည်လိမ့်မည်
ဆာလံ ၂၄ တွင်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသည်ဘုရားသခင်နှင့်၎င်း၊ ဤကျမ်းပိုဒ်ကိုလူမျိုးများကလက်မခံပါ။ သူတို့၏နယ်မြေများကိုလက်နက်ချခြင်း၊ အဇာဘိုင်ဂျန်သည်နယ်မြေပိုင်နက်အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ပွဲအလယ်တွင်ရှိသည်။ အစ္စရေးနှင့်ပါလက်စတိုင်းတို့သည်အငြင်းပွားမှုအလယ်တွင်ရှိနေသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်နယ်စပ်ပconflictsိပက္ခများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်.
ဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်ရွေးကောက်ပွဲများအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတအဖြစ်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကကမ္ဘာကြီးကိုအစီအစဉ်တစ်ခုနှင့်အညီဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက“ အစအ ဦး ၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Joe Biden သည်ယခုအစီအစဉ်၏အလယ်တွင်သမိုင်းတွင်နက်ရှိုင်းစွာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းဘီလီယံနှင့်ချီ။ သမိုင်းကိုမသိသောအချိန်၌စတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကလူသည် Ape မှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာသည်ဟုဆိုကြသည်။ Ape သည်ကမ္ဘာမြေ၊ ရေ၊ မီးနှင့်လေထုမှဒြပ်စင်လေးမျိုးမှဆင့်ကဲပြောင်းလဲရန်နှစ်ဘီလီယံများစွာကြာခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်သူ၏ဇနီးEveဝဟုခေါ်သောပထမဆုံးလူသားမှလူသား၏သမိုင်းကိုသမ္မာကျမ်းစာမှစတင်ခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်Eveဝတို့သည်physicalဒင်ဥယျာဉ်တွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ တိရစ္ဆာန်များနှင့်ငှက်များသည်မျိုးပွားနိုင်သော်လည်းအာဒံသည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏။ ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းသောလူအာဒံအားဖြင့်လောကီသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြ၏။ သမ္မာကျမ်းစာကလူတစ် ဦး ၌အပြစ်မရှိပါကသူသည်သဘာဝအင်အားစုများနှင့်မထိတွေ့နိုင်ကြောင်းသွန်သင်သည်။
အာဒံနှင့် Eve ၀ သည်အပြစ်ပြုခဲ့သည်။ သူတို့တွင်ကာtwoနနှင့်အာဗေလတို့သည်မွေးဖွားခဲ့ပြီးသားသမီး ၂ ယောက်ထွန်းကားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေတိုးများလာလေပconflictsိပက္ခများနှင့်လည်းတိုးများလာသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်ofဒင်ဥယျာဉ်တစ်ခုမဟုတ်တော့ပါ။ လူများသည်သဘာဝအားဖြင့်များပြားလာသည်နှင့်အမျှမိသားစုယူနစ်များတွင်စုပေါင်းကြသည်။ ဒီမိသားစုယူနစ်တွေဟာနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတွေဖြစ်လာတယ်။ လူ ဦး ရေတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှကမ္ဘာမြေတစ်ဝက်တွင်သူတို့၏တိုင်းပြည်သည်အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည်။ မတူကွဲပြားသောမိသားစုများနှင့်နိုင်ငံများ၊ ပြန့်ပွားလာသည်နှင့်အမျှမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပconflictsိပက္ခများ၊ နယ်စပ်ဒေသပconflictsိပက္ခများ။ နယ်စပ်ပconflictsိပက္ခများကိုဤနိုင်ငံများအကြားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်စစ်ပွဲများမှတဆင့်ဖြေရှင်းခဲ့သည်.
ဤနယ်နိမိတ်ပconflictsိပက္ခများအတွက်သမ္မာကျမ်းစာသည်အဓိကအားဖြင့်ကမ္ဘာကြီးသည်ဘုရားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်ပြီးလူသားအားလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ယူအက်စ်ဥက္ကPresident္ဌဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်နယ်စပ်ပconflictsိပက္ခများအတွက်သမ္မာကျမ်းစာအဖြေကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကမ္ဘာအနှံ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွင်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန်ကြိုးစားသင့်သည်။ အမေရိကန်သည်ဤနယ်စပ်ပconflictsိပက္ခများကိုဖြေရှင်းရန်အခြားကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။ နာဂစ် - ကရာဘakhတွင်ရုရှား၊ တူရကီနှင့်အီရန်ပါဝင်သည်။ ရုရှားသည်ဒေသအတွင်းရှိတပ်များအားအသုံးချခြင်းအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အမေရိကသည်နယ်စပ်ပconflictိပက္ခတွင်တတိယကြားနေပါတီ၏အခန်းကဏ္playsကိုအမြဲတမ်းပါဝင်သည်။ အမေရိက၏ကြားနေရေးကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်မေးခွန်းထုတ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ပင်ကုလသမဂ္ဂသည်ကြားနေမှုကိုပြenfor္ဌာန်းရန်ဖြစ်သည်။ အမေရိက၊ ရုရှားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့သည်ကုလသမဂ္ဂ၏ကြီးကျယ်သောနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရုရှားသည်ဘုံနှောင်ကြိုးရှိသည်။ ဒီမိုကရေစီကတရုတ်ကိုခြိမ်းခြောက်နေတယ်။ ဒီမိုကရေစီသည်သီအိုကရက်တစ်ဖြစ်သည့်အီရန်ကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်။ Trump နှင့် Pompeo ဒီမိုကရေစီဖြန့်ဝေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ Corona သည် Trump အတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့ပြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကမ္ဘာကြီးသည်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြင့်ဖန်တီးထားခြင်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ သမ္မာကျမ်းစာကကမ္ဘာကြီးကိုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြင့်ဖန်တီးသည်ဟုသွန်သင်သည်။ သိပ္ပံပညာအရအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုရရှိရန် မှလွဲ၍ အခြားတီထွင်ဖန်တီးမှုအတွက်အဆုံးစွန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ။ သိပ္ပံပညာသည်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဥပဒေကိုသာအသိအမှတ်ပြုသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးသည်နိုင်ငံများအကြားအထူးသဖြင့်နျူကလီးယားပျက်စီးခြင်းမှကမ္ဘာကြီးကိုခြိမ်းခြောက်သည့်အချိန်တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာကဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီကမ္ဘာပေါ်၌သူ၏နာမကိုဖော်ပြရန်ဖန်ဆင်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသွန်သင်သည်။ တိုင်းပြည်များသည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ပြီးစစ်ပွဲကိုရှောင်ရှားသည့်အခါတိုင်းရှာလုံ (သို့) ငြိမ်းချမ်းရေးဟူသောဘုရားသခင်၏နာမတော်ကိုဖော်ပြသည်။ မိဘများအကြားအိမ်တွင်လည်းငြိမ်းချမ်းမှုရှိသည်။ ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုမရှိသည့်အခါတွင်လည်းလမ်းများပေါ်တွင်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိကြသည်။ တရားဟောရာကျမ်း၌ဤသို့ဆိုထားသည်မှာ“ ထာဝရဘုရားသည်သင်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်လော့။ သင်သည်သင်၏အိမ်၌ နေ၍ လမ်းပေါ်တွင်သွားပါ၊ အိပ်ပါ၊ နှိုးပါ။ ဂျူးလူမျိုးများသည်သူတို့၏စကားဝိုင်းတွင်ပါသည့်သားရေစာတစ်ပုလင်းကိုချိတ်ဆွဲထားသဖြင့်မမေ့သင့်ပါ။ ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏နာမသည်တလုံးတဝတည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကားရှလုံလော။
အာရပ်နိုင်ငံများနှင့်အစ္စရေးတို့သည်ကြီးမားသောအလားအလာရှိသောငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဂျိုးဘိုင်ဒန်ယခုသမ္မတ Trump စတင်ခဲ့သောအလုပ်ကိုပြီးစီးရန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သိနာတောင်တွင်၊ မောရှေမှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်ကပညတ်တော်ဆယ်ပါးပေးသည့်အချိန်၌ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းအခိုက်အတန့်၌ဘုရားသခင်အားဖွင့်ပြခြင်းနှင့်သူ့နာမည်သည်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သိနာတောင်မတိုင်မီတွင်လူတို့သည်ကမ္ဘာကြီးကိုဘုရားသခင်မရှိဘဲထာဝရရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲသိပ္ပံနည်းကျမျက်လုံးမှကြည့်ရှုကာရှင်သန်ရွှင်လန်းရန်သာဖြစ်သည်။ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးပထမ ဦး ဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သိနာတောင်နှင့်ဂျူးလူမျိုးတို့သည်ကမ္ဘာ့ဘာသာတရားသို့ယူဆောင်လာကြသည်။ ဂျူးဘာသာသည်ပထမ ဦး ဆုံး Monotheistic ဘာသာတရားဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်အစ္စလာမ်သည်ဂျူးဘာသာနောက်လိုက်ခဲ့သည်။
ဂျူးဘာသာသည်ofသရေလလူမျိုးတို့၏ဘာသာဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်ရောမတို့၏ဘာသာဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်သည်အော်တိုမန်အင်ပါယာ၏ဘာသာတရားဖြစ်လာသည်။ ဒီအင်ပါယာတွေဟာအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ရောမတို့ကဂျေရုဆလင်မှနှင်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ဂျူးများသည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
ဘိုင်ဇင်တိုင်းအင်ပါယာ၏ဖျက်ဆီးခြင်းသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်ပရိုတက်စတင့်ဘာသာတရားကိုအနောက်ကမ္ဘာသို့ပျံ့နှံ့စေခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးအော်တိုမန်အင်ပါယာပြိုလဲခြင်းအစ္စလာမ်သည်တူရကီ၊ အဇာဘိုင်ဂျန်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းတစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ဘာသာတရားသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ သို့သော်ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ဘာသာတရားသည်လောကစံနှုန်းများကိုကျင့်သုံးသောအခါဘဝနောက်ခံကျဆင်းခဲ့သည်။ ၁၇၇၆ တွင်အမေရိကန်သည်ဂရိတ်ဗြိတိန်မှခွဲထွက်ခဲ့ပြီးလွတ်လပ်ရေးကြေငြာခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။
သမ္မတ Trump သည်လွတ်လပ်မှုနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကိုအာမခံသောကမ္ဘာတစ်လွှားရှိအမေရိကန်တန်ဖိုးများကိုဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်လောကနှင့်ဘာသာရေးအကြားကွာဟမှုကိုပေါင်းကူးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ လက်ဝဲလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်များနှင့်ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်၏လက်ဝဲအတွေးအခေါ်နောက်လိုက်များသည်သမ္မတ Trump အားဆန့်ကျင်။ သူအားအစားထိုးရန်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ လက်ဝဲလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီသည်ဘာသာရေးကိုလွတ်လပ်စွာထောက်ပံ့သောရီပတ်ဘလီကန်ကွန်ဆာဗေးတစ်တန်ဖိုးများကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည် ဤလစ်ဘရယ်စံနှုန်းများသည်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း၊ လိင်တူချစ်သူအခွင့်အရေးများကိုထောက်ခံသည့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီသို့မဟုတ်မဟုတ်ဝါဒီများဖြစ်ကြသည်။ George Floyd - Black Lives Matter ကိုသတ်ဖြတ်ပြီးနောက်မင်းမဲ့စရိုက်နှင့်နီးစပ်လာခဲ့သည်။
ဘုရားသခင့်စီမံချက်သည်ဘာသာတရားကိုဘဝ၌ပေါင်းစည်းရန်ဖြစ်သည်။ လောကစံနှုန်းများသည်လောကသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှဘာသာတရားသည်နောက်ကွယ်တွင်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကမ္ဘာကြီးကိုလောကသာယာစေလိုလျှင်ဆန့်ကျင်မည့်ခိုင်မာသည့်ဘာသာရေးတန်ဖိုးများကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ သူသည်အစ္စရေးပြည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အငြင်းပွားမှုကဲ့သို့သောဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ကမ္ဘာ့ပconflictsိပက္ခများတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
ခေတ်သစ်အစ္စရေးနိုင်ငံတည်ထောင်သောအခါဂျူးလူမျိုးများမိမိတို့နေရင်းပြည်သို့ပြန်သွားခဲ့ကြသည်။ ခေတ်သစ်အစ္စရေးနိုင်ငံသည်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်းသည်ဂျူးဘာသာမှဆင်းသက်လာသောအခြားဘာသာရေးဘာသာတရားများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်ခရစ်ယာန်angelဝံဂေလိတရားကိုလွတ်လပ်စွာဖြန့်ဝေခဲ့သော်လည်းသမ္မတ Trump ထံမှအကူအညီကိုသူတို့မငြင်းခဲ့ပါ။ သူသည်အစ္စရေးကိုယူအေအီးနှင့်အတူတကွစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ချိန်နှင့်ဘာရိန်းနေတန်ယာဟုက၎င်းအားဘက်ပေါင်းစုံခြိမ်းခြောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်တိုင်သူ၏အကူအညီကိုလက်ခံခဲ့သည်။ Trump အီရန်နှင့်Israelသရေလအမျိုးအကြားအလားအလာစစ်နှောင့်နှေးနိုင်ခဲ့သည်။
နှစ်ဖက်စလုံးမှဘာသာရေးအခြေခံဝါဒီများအစ္စလာမ်နှင့်ဂျူးဘာသာသည်သူတို့၏ဘာသာရေးတန်ဖိုးများကိုဘယ်တော့မျှအလျှော့ပေးလိုက်လျောမည်မဟုတ်ပါ။ အီရန်သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင်အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးတွင်ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂျူးလူမျိုးများသည်homသရေလပြည် မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်နေအိမ်မျှမရှိပေ။ ၀ န်ကြီးချုပ် Yitzchab Rabin ကို Osion သဘောတူစာချုပ်အပြီးတွင်အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒီများကလုပ်ကြံခံရသည်။ အစ္စရေးတွင်နေထိုင်သောအလယ်အလတ်ရိုးရာဂျူးလူမျိုးများကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်အီရန်မှအမေရိကန်၏ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သမ္မတ Donald Trump ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်။ အဓိကအားဖြင့်အီဂျစ်နှင့်ဆော်ဒီအာရပ်နိုင်ငံများသည်အားကြီးသောအီရန်ကိုဆန့်ကျင်ကြသည်။
အစ္စရေးတွင်သူတို့၏သြသဒေါက်စ်တို့တွင်ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒရှိသည်။ အတော်များများကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကသမ္မတ Trump သင့်လျော်သောလေးစားမှုမပေးခဲ့ပါဘူး။ ဂျူးတို့၏ယုံကြည်ချက်အရအစ္စရေးသည်လူကိုမဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်ကိုသာမှီခိုအားထားရမည်။ ၎င်းတို့သည်ခရစ်ယာန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆန့်ကျင်။ အန္တရာယ်များကိုဝါးမျိုခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Chassidism ကိုတည်ထောင်သူ Baal Shem Tov ကဲ့သို့သောဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်အမေရိကန်နှင့်ကမ္ဘာတွင်ထိုကဲ့သို့သောလစ်ဘရယ်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများ၏တန်ဖိုးများကိုဂျူးလူမျိုးများနှင့်လူသားများအားအန္တရာယ်ပြုရန်ပိုမိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
ကားလ်မာ့ခ်စ်နှင့်ထရော့စကီးတို့ကဲ့သို့သောဂျူးများသည်ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏အစတွင်လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့သည်။ ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်သည် Open Society ကိုတည်ထောင်သူဂျူးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးလက်ဝဲလက်ဝဲဘက်သို့ ဦး ဆောင်သည်။ မေရှိယအားယုံကြည်စိတ်ချမှုအပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် Chassidism ၏အလင်းတွင်ဂျူးလူမျိုးများအတွက်ဘုရားမဲ့ဝါဒနှင့်လစ်ဘရယ်ဝါဒထက်သာလွန်သည်။
ယုဒလူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြ၏။ ofဒင်ဥယျာဉ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသတ္တဝါအားလုံးသည်အာဒံမှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအသိပညာ၏သစ်ပင်မှအစာစားသောအခါအပြစ်တရားပြီးနောက်အာဒံမပါဘဲဘုရားသခင်နှင့်ချိတ်ဆက်ယုံကြည်ခြင်းကိုအလယ်အလတ်အဖြစ်။ အစ္စလာမ်နှင့်ဂျူးဘာသာသည်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းနှင့်သာချိတ်ဆက်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်မေရှိယမှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသုံးမျိုးသည်ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်တွင်ရှိသည်။
ဘာသာရေးကိုဆန့်ကျင်သောလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာရန်ဖွဲ့စည်းထားသောအခါဘုရားသခင်မဲ့ဝါဒသည်ဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ဘာသာတရားတစ်ခုမှတဆင့်ဘုရားသခင်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခက်အခဲရှိသောသူတို့သည်ယနေ့စကြဝalာယုံကြည်ခြင်းမှတဆင့်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် Baha "ကိုယ့်ယုံကြည်ခြင်းကို နှင့် တိုးတက်သောဂျူးဝိညာဉ်ရေးရာ။ ဘုရားသခင်သည်စကြဝofာ၏ဘုရင်ဖြစ်သည်။ သူကအပြစ်ပေးသူဆုချ။ Corona Pandemic သည်အပြစ်ပေးသောဘုရားလက်တော်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကို Pandemic ဝင်တိုက်ခြင်းမပြုမီသမ္မတ Trump သည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရောက်နေသည်။ အစ္စရေးကဂျိုးဘိုင်ဒင်သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်ဤလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လုပ်သွားမည်ဟုမျှော်လင့်သည်။
ဘိုင်ဒင် အများပိုင်သတင်း Harris က ဟူး ငြိမ်းချမ်းရေး